Compression Resistance Testing Machine Factory - China Compression Resistance Testing Machine ထုတ်လုပ်သူများ၊
DRK123 ကတ်တွန် ဖိသိပ်မှု စမ်းသပ်ခြင်း စက် 1200
DRK123C carton compression testing machine 1200 သည် carton ၏ compression performance ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်ဖြစ်ပြီး ပလတ်စတစ်စည်များ (စားသုံးနိုင်သောဆီ၊ ဓာတ်သတ္တုရေ)၊ စက္ကူစည်များ၊ ပုံးများ၊ စက္ကူဗူးများနှင့် ကွန်တိန်နာစည်များ (IBC စည်များ) တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။) ကွန်တိန်နာ၏အခြားဖိအားစမ်းသပ်မှု။အင်္ဂါရပ်များ 1. စနစ်သည် ရှစ်လက်မ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လည်ပတ်မှု panel ဖြင့် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံပြီး အလိုအလျောက်စနစ် မြင့်မားသည့် မြန်နှုန်းမြင့် ARM ပရိုဆက်ဆာကို လက်ခံပါသည်။
DRK123B ကတ်တန်ဖိသိပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းစက် 800 သည် ပုံးပုံးများ၏ ဖိသိပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။DRK123 ကတ်တွန်ဖိသိပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းစက် 800 သည် ပုံးပုံးများ၏ ဖိသိပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။အင်္ဂါရပ်များ 1. စနစ်သည် ရှစ်လက်မ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လည်ပတ်မှု panel ဖြင့် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံပြီး အလိုအလျောက်စနစ်၊ မြန်ဆန်သောဒေတာစုဆောင်းမှု၊ အလိုအလျောက်တိုင်းတာမှု၊ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသည့် မြန်နှုန်းမြင့် ARM ပရိုဆက်ဆာကို လက်ခံပါသည်။
DRK123 ကတ်တွန် ဖိသိပ်မှု စမ်းသပ်ခြင်း စက် 600
DRK123A carton compression testing machine 600 သည် carton ၏ compression performance ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်ဖြစ်ပြီး ပလတ်စတစ်စည်များ (စားသုံးနိုင်သောဆီ၊ ဓာတ်သတ္တုရေ)၊ စက္ကူစည်များ၊ စက္ကူသေတ္တာများ၊ စက္ကူဗူးများ၊ ကွန်တိန်နာစည်များ (IBC စည်များ) တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။) ကွန်တိန်နာ၏အခြားဖိအားစမ်းသပ်မှု။အင်္ဂါရပ်များ 1. စနစ်သည် ရှစ်လက်မ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လည်ပတ်မှု panel ဖြင့် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံပြီး အလိုအလျောက်စနစ် မြင့်မားသည့် မြန်နှုန်းမြင့် ARM ပရိုဆက်ဆာကို လက်ခံပါသည်။
DRK123E-3 ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ကာတွန် ဖိသိပ်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာ
DRK123E-3 ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပုံးချုံ့စက်သည် ပုံးပုံးများ၏ ဖိသိပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကော်ဖတ်သေတ္တာများ၊ ပျားလပို့သေတ္တာများနှင့် အခြားထုပ်ပိုးမှုအပိုင်းများ၏ ဖိသိပ်မှုစမ်းသပ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်။ပလပ်စတစ်စည်များ (စားသုံးနိုင်သောဆီ၊ ဓာတ်သတ္တုရေ)၊ စက္ကူစည်များ၊ ပုံးများ၊ စက္ကူဗူးများ၊ ကွန်တိန်နာစည်များ (IBC စည်များ) နှင့် အခြားကွန်တိန်နာများ၏ ဖိအားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ထူးခြားချက်များ 1. စနစ်အား မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး 8-...
DRK123AL ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ကတ်တွန် ဖိသိပ်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာ
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပုံးချုံ့စက်သည် ပုံးပုံးများ၏ ဖိသိပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကော်ဖတ်သေတ္တာများ၊ ပျားလပို့သေတ္တာများနှင့် အခြားထုပ်ပိုးမှုအပိုင်းများ၏ ဖိသိပ်မှုစမ်းသပ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်။ပလပ်စတစ်စည်များ (စားသုံးနိုင်သောဆီ၊ ဓာတ်သတ္တုရေ)၊ စက္ကူစည်များ၊ ပုံးများ၊ စက္ကူဗူးများ၊ ကွန်တိန်နာစည်များ (IBC စည်များ) နှင့် အခြားကွန်တိန်နာများ၏ ဖိအားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။အင်္ဂါရပ်များ 1. စနစ်သည် ရှစ်လက်မအရွယ် ထိတွေ့ရောင်စခရစ်ဖြင့် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံပါသည်။
DRK123AS ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပုံးချုံ့စက်သည် ပုံးပုံးများ၏ ဖိသိပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဖော့ပုံးများ၊ ပျားလပို့သေတ္တာများနှင့် အခြားထုပ်ပိုးမှုအပိုင်းများ၏ ဖိသိပ်မှု၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် အစုလိုက်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။ပလပ်စတစ်စည်များ (စားသုံးနိုင်သောဆီ၊ ဓာတ်သတ္တုရေ)၊ စက္ကူစည်များ၊ ပုံးများ၊ စက္ကူဗူးများ၊ ကွန်တိန်နာစည်များ (IBC စည်များ) နှင့် အခြားကွန်တိန်နာများ၏ ဖိအားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ထူးခြားချက်များ 1. စနစ်သည် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာ cont ကို လက်ခံသည်...